श्रेय बाबालाई दिन चाहन्छु-पार्वती राई :: Press Chautari ::
श्रेय बाबालाई दिन चाहन्छु-पार्वती राई
प्रशान एलुङ् राई
सानै उमेरदेखि नृत्यमा बिशेष अभिरुची राख्दै आएकी पार्वती राई हाल नेपालकी चर्चित एवं लोकप्रिय मोडेल हुन् । राजु गुरुङ्ग र मुना थापा मगरद्धारा स्वरबद्द “हेर्छौ ओठ टोकी...” बोलको दोहोरी गीतबाट मोडलिङ् यात्रा शूरु गरेकी उनले हाल सम्म तीन सय भन्दा बढि म्यूजिक भिडियोहरुमा मोडेलको रुपमा काम गरिसकेकीछन् । पेशागत रुपमा चार बर्ष अघिदेखि यस क्षेत्रमा आएकी उनी लोक-दोहोरी गीतमा चलेका मोडेलहरु मध्येको अग्रपंक्तिमा आउँछिन् ।
तीन/चार बर्षको उमेरबाटै नाँच्न थालेकी पार्वती राईले विद्यालयस्तरमा आयोजना हुने विविध् सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा नछुटाई भाग लिने गर्थिन् । यसको अवला उनले विभिन्न संघ/संस्थाले आयोजना गर्ने नृत्य सम्बन्धी प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरुमा नबिराई सहभागीता जनाउने गर्दथिन् । नृत्यप्रति छोरीको लगाव र तीब्र इच्छा देखेर उनका बाबा (भक्त बहादुर राई) ले उनलाई नृत्य सम्बन्धी औपचारिक ज्ञानको लागि नृत्य प्रशिक्षण केन्द्रमा भर्ना गराईदिए । बाल्यकालको स्मरण गर्दै पार्वती अगाडि भन्छिन्–“मेरो बाबा आफु नाच्नु हुन्न तर मेरो नृत्य कलालाई वहाँले जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु हन्छ । मैले आजसम्ममा जे जति गर्न सके यसको श्रेय मेरो श्रद्देय बाबालाई दिन चाहन्छु ।”
नृत्यकलासँगै पढाईमा पनि उनी अब्बल थिईन् । यसैकारण उनले पढाई र नृत्यलाईसँगै समायोजन गर्दै अगाडि बढेकिछन् । बिभिन्न प्रतियोगिताहरुमा भाग लिने क्रममा उनले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने “छम्छमी” नामक रियालिटी शोमा उत्कृष्ट पाचौंसम्म पुगेपछि भने उनको नृत्यकलाले अझ व्यापकता पायो । यससँगै उनले चौतर्फी चर्चापरिचर्चा कमाईन् । उनको लोकप्रियता चुलिँदै गएपछि बिभिन्न गीतमा मोडेलको रुपमा अभिनय गर्ने अवसर पाईन् र आफुलाई व्यस्त मोडेलको रुपमा हाल स्थापित गराएकिछन् ।
आजको स्थानसम्म आईपुग्नलाई उनले धेरै संघर्ष गरेकिछन् । आफुले अहिले पाएको सफलता त्यत्ति सजिलो रुपले नपाएको बताउँने राईले जीवनमा आईपर्ने सुख दुःख, हाँसो खुसी र उकाली ओराली नियमित प्रक्रिया रहेको बताउँछिन् । “भगवानले मलाई यहि क्षेत्रमा कर्म गर्नको लागि पठाउनु भएको छ, मैले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यहि क्षेत्रमा इमान्दार भएर काम गर्नु पर्छ” । आफ्नो कर्म क्षेत्रप्रति सन्तुष्टि पोखाउँदै उनी अगाडि थप्छिन्–“यो क्षेत्रमा मैले अझ धेरै गर्नु छ । नेपाली कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा मैले पनि केहि योगदान दिन सके त्यहि सर्वस्व ठान्नेछु ।”
बिभिन्न लोक, आधुनिक एवं पपगीतहरुमा अभिनय गरेर लोकप्रिय मोडेलको रुपमा स्थापित पार्वती राईले “मेरो जीवनसाथी” र “हमजाइगा” नामक चलचित्रमा समेत अभिनय गरेकीछन् । सर्पोटिङ्ग आर्टिस्टको रुपमा अभिनय गरेकी “मेरो जीवनसाथी” प्रर्दशनमा आईसकेको चलचित्र हो भने “हामजाइगा” प्रर्दशनको क्रममा रहेको छ । मोडलिङ्ग र चलचित्रसँगै उनले देशका बिभिन्न ठाउँमा आयोजना हुने महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुने गर्छिन् । यससँगै उनले हालसम्म कतार, दुबई, हङ्गकङ्ग, कोरिया, बहराईन, अमेरिका लगायतका बिभिन्न देशमा आफ्नो नृत्यकला प्रर्दशन गरिसकेकीछन् ।
व्यस्तता बढेसँगै उनी यस क्षेत्रमा सन्तुष्टि रहेको बताउँछिन् । मोडलिङ्ग, चलचित्र र कार्यक्रमबाट उनले राम्रै आम्दानी गर्छिन । उनी भन्छिन्–“ मान्छेलाई जत्तिले पनि पुग्दैन । यत्ति हो, घरखर्चको लागि केहि हिस्सा मैले पनि सम्हाल्न पाएकोछु । छोरी भएर पनि छोराको कर्तव्य निभाउन पाएकी छु ।” उनी थप्छिन्–“सायद यसैले होला, बाबाले मलाई छोरी होइन, छोरा हो भन्नु हुन्छ ।”
प्रेम र विवाहलाई समयभावका कारण खासै महत्व नदिएकी राईले यस क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउँछिन् । उनले हालसम्म आफुले चाहेको जस्तो जोडी नजुरेको र समय पनि नभएकोले कसैसँग प्रेम सम्बन्ध नरहेको समेत खुलासा गरिन् । आफु ग्लायमर क्षेत्रमा रहेको कारण मन पराउनेहरु प्रशस्तै भए पनि अझै ५/६ बर्ष विवाह गर्ने सूर नरहेको समेत बताईन् ।
छोटो समयमा दर्शक र प्रशंसकहरुले दिएको माया र साथ प्रति नतमस्तक हुने गरेकी पार्वती राईको ईच्छा भने यसै क्षेत्रमा केहि गर्ने रहेको छ । “मलाई जीवनमा यसै क्षेत्रले नाम, काम र दाम सबै दिलाएको छ” उनी अगाडि थप्छिन्–“जीवनमा धेरै पैशा कमाए भने नृत्य सम्बन्धी एउटा राम्रो नृत्यशाला खोल्ने धोको छ, हेरौं भविष्यमा के हुन्छ ?
अमेरिका कहिले र के को सिलसिलमा आउनु भयो ?
– अगस्ट २८ मा म लगायत नेपालका अन्य कलाकारहरुको साथमा मेघा कन्सर्टको लागि आएकी हुँ । यो मेरो पहिलो पल्ट पनि हो ।
कस्तो लाग्यो त अमेरिका ?
– अत्यन्तै राम्रो लाग्यो । अमेरिकाको आपैmमा ठूलो रहेछ । यसैले सबै ठाउँमा जाने समय मिलेन । जो जत्तिलाई भेटे सबै आफ्नै परिवारलाई भेटे जस्तो लाग्यो । धेरै समय छुट्टिएर भेटेको अनुभव भयो ।
बिशेष के राम्रो लाग्यो अमेरिकाको ?
– अमेरिका जस्तो ठाउँमा आएर पनि नेपाली कला र संस्कृतिको लागि माया गर्ने दर्शक र श्रोता प्रशस्तै देखें÷भेटे । सबै जना आ–आफ्नो काममा व्यस्त भए पनि फुर्सदको समयमा देश र देशको बारेमा चिन्ता गर्नेहरु धेरै पाए ।
अमेरिकामा कार्यक्रम कति ठाउँमा गर्नु भयो ?
– मैले चाँहि अहिले सम्म बाल्टिमोर र एटलान्टामा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । आउने सेप्टेम्बर २७ मा न्युयोर्कमा मुख्य कार्यक्रम छ ।
एउटै ग्रुपमा आएर कार्यक्रमको लागि कलाकारहरु बिभिन्न राज्यमा बाँडिनु भएको छ नि यसो किन भएको हो ?
– हाम्रो ठूलो ग्रुप छ । सबै आयोजकहरुलाई खर्चको हिसाबले महँगो पर्न आउँछ यसकारण हुन सक्छ ।
सेप्टेम्बर २७ को तयारी कस्तो छ ?
ठीकै । मैले प्रस्तुत गर्ने भनेको नृत्य हो । २७ तारिख केहि फास्ट आईटमसँगै दोहोरी र आधुनिक गीतमा नृत्य प्रस्तुत गर्दैछु ।
त्यसपछिको योजना ?
– कार्यक्रम सकिए लगतै हामी २८ सेप्टेम्बरमा नेपाल फर्कन्छौं ।
ग्रीनकार्ड लिएर यतै बस्ने विचार छैन ?
छैन । नेपालमा धेरै शुटिङ्ग, महोत्सव र बिदेशका बिभिन्न कार्यक्रमहरु छोडेर यता आएकी हुँ म पनि । यसैले अहिलेलाई यसबारे सोचेकी छैन ।
(उनीद्वारा अभिनित पछिल्लो लोक दोहोरीको म्यूजिक भिडियो )
शनिवार, २०७१ आश्विन १० गते ०३:५८ / Saturday, Sep 27, 2014 3:58 am
51. पूरा भयो एनआरएनएको नवौं क्षेत्रिय सम्मेलनको तयारी
52. गम्बुले गाएर कमाएको सम्पूर्ण रकम अनाथ बालबालिकाहरुको गाँस, बाँस र शिक्षाको लागि
53. एनआरएनएको नवौं क्षेत्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा
54. तामाङ सोसाईटी अफ अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा शान्त थोकरको उम्मेद्वारी
55. दाहाल नेपालको ३९ औ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
56. न्युयोर्कमा स्व.अम्बर गुरुङको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा
57. फिप्नामा ७ सल्लाहकार समितिको मनोनयन
58. न्युयोर्कमा साकेला उभौली भव्य रुपमा सम्पन्न
59. एनआरएनएको नवौं क्षेत्रिय सम्मेलन न्युजर्सीमा हुँदै
60. केआरएसएले जुन ५ तारिख न्युयोर्कमा साकेला उभौली मनाउँदै
61. नेपाल डे परेडमा घन्कियो नेपाल
62. ‘नेपाल डे परेड’ को तयारी पुरा
63. न्युयोर्कमा गीता खत्रीको रचनामा पविताको 'द्धीप' सार्वजानिक
64. न्युयोर्कमा नेपाली उत्पादनको तीन दिने अन्तर्राराष्ट्रिय प्रर्दशनी सेप्टेम्बरमा
65. कांग्रेस महामन्त्री न्युयोर्क आई पुगे
66. नेपाल डे परेडमा शेर्पा किदुगको समर्थन र सहभागीता नरहने
67. न्युयोर्कमा कलाकार संघको आयोजनामा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
68. केआरएसएको न्युयोर्क च्याप्टर अध्यक्षमा भारती राई
69. में २२ तारिख न्युयोर्कमा नेपाल डे परेड
70. संघीय समाज अमेरिकाको आयोजनामा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
71. बेलायती सेनाका बहादुर दीपप्रसाद पुनलाई न्युयोर्कमा सम्मान
72. बर्तिकाको बिम्बाकाश बिमोचित
73. युनाईटेड किरात राई अर्गनाईजेसनको न्युयोर्क च्याप्टर अध्यक्षमा केशवराम राई निर्विरोध
74. जिमिनको आयोजनामा मार्च २६ तारिख आनी छोइङ् लाईभ कन्सर्ट
75. शेर्पा किदुग अमेरिकाको आन्तरिक विवाद टुंगियो
Results 233: You are at page3of 10